Maitiro ekuisa Google Chrome pane akasiyana Linux kugoverwa? | Linux Vakapindwa muropa
Iyi dzidziso ndeyevatangi muLinuxzvakanaka isu tichagovana dzimwe nzira dzekuisa iyo Google Chrome browser paLinux.
Vagadziri veGoogle Chrome vanopa zviri pamutemo madhiri uye rpm mapakeji yekumisikidza kweiyi browser mune akasiyana Linux kugoverwa nerutsigiro rwemhando iyi yemapakeji.
Zvakare, usati waenderera mberi nekumisikidza yakananga yeGoogle Chrome browser paLinux, zvakakosha kuti iwe utarise nezve Google Chrome haichabatanidze 32-bit rutsigiro rweLinux.
1 Kuisa Google Chrome kubva padhegi package
2 Kuisa Google Chrome paDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa kubva pane repository
3 Kuisa Google Chrome kubva pa rpm package
4 Kuisa Google Chrome kubva kune repository pane CentOS, RHEL, Fedora uye zvigadzirwa.
5 Kuisa Google Chrome pane Arch Linux uye zvigadzirwa.
Kuisa Google Chrome kubva padhegi package
Kana iri Debian-based masisitimu senge Deepin OS, Neptune, Miswe kana kunyange zvigadzirwa zvavo zvakaita seUbuntu, Linux Mint, Elementary OS kana chero kugoverwa nerutsigiro rwezvikwereti zvemadhibhodhi.
Inofanirwa ye dhawunirodha pasuru kubva kune yepamutemo Google Chrome peji, saka vanofanirwa kuenda ku next link kutora pasuru.
Waita kurodha pasi kwepakeji ivo vanokwanisa kuisa zvakananga neyavanofarira package maneja, kana kubva kune iyo terminal vanogona kuzviita nekutaipa unotevera kuraira:
Kuisa Google Chrome paDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa kubva pane repository
Izvo zvakare zvinokwanisika kuisa iyo bhurawuza pasina kutora dhata package, nekuti izvi zvinodikanwa kuti uwedzere repository kune iyo system, iyo inowedzerwa neinotevera rairo:
Uye mukati mefaira isu tinofanirwa kuwedzera zvinotevera:
Isu tinochengetedza neCtrl + O uye tinobuda neCtrl + X. Kana izvi zvangoitwa, zvakafanira kuti titore kiyi yeruzhinji kubva kuGoogle Chrome repository, tinoita izvi nekutaipa:
Tinofanira kuendesa kunze muchirongwa ne:
Iye zvino Tinofanira kugadzirisa zvinyorwa zvedu uye zvinyorwa ne:
Y pakupedzisira tinoisa iko kushanda ne:
Kuisa Google Chrome kubva pa rpm package
Para kesi yemasisitimu ane rutsigiro rweRPM mapakeji seCentOS, RHEL, Fedora, openSUSE uye zvigadzirwa ivo vanofanirwa kurodha pasi iyo rpm package, iyo inogona kuwanikwa kubva ku chinotevera chinongedzo.
Kamwe kurodha pasi kwaitwa, ivo vanofanirwa kuisa pasuru neyavanofarira package maneja kana kubva kune terminal vanogona kuzviita nemirairo inotevera:
Kuisa Google Chrome kubva kune repository pane CentOS, RHEL, Fedora uye zvigadzirwa.
Kune aya masisitimu tinogona kuwedzera dura rinozotibatsira kuisa mubrowser tisingade kurodha pasi iyo RPM faira.
Mune yakakosha kesi ye Fedora 28 kana iwe ukagadzira chechitatu-bato repositori kubva pawakaisa, hapana chikonzero chekuwedzera chero chinhu, ingo enda kune yekumisikidza kuraira.
Pane rimwe divi kana zvisiri, iwe unofanirwa kunyora kuti:
Kune mamwe ese masisitimu kuwedzera repository kune system, ingo nyora zvinotevera mune terminal yekuwedzera inoenderana ne /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo
Waita izvi, kare Tinogona kuisa webhu saiti pane ino nechero ipi inotevera mirairo:
Kuisa Google Chrome pane Arch Linux uye zvigadzirwa.
Kuti inofanirwa kuve neAUR wizard yakaiswa pane avo masisitimu, Unogona kutarisa chinongedzo chinotevera kwandinogovana zvimwe zvacho.
Uye wakagadzirira nayo, uchave watoisa iyo Google Chrome browser pane yako system.
Kunyangwe mumigove mizhinji bhurawuza iri mukati memidziyo yavo, havawanzo kuve neyazvino vhezheni. Saka kana paine chiteshi chepamutemo zvirinani kuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Maitiro ekuisa Google Chrome pane akasiyana Linux kugoverwa?
Ini, kuLiGnux, ndinokurudzira kushandisa Chromium pamwe pepperflash. Iyo yakavhurika vhezheni yeChannel, ingangove iine hunhu hwayo hwese, zvingave zvisinganzwisisike kuda imwe yeiyo isipo, uye pamusoro pezvose zviri mune zvese zvinyorwa, saka iyo yekuvandudza haina kunonoka, kana izvozvo zvichinetsa iwe.
alex zaragoza akadaro
Mhoroi, ndiri kuyedza kurodha pasi chrome kune raspberry pi3 ine debian, uye ndichitevera nhanho dzaunoratidza, kana uchipinza kiyi nemutemo «kusaina kiyi chrome sudo -kiyi yekuwedzera linux_signing_key.pub» inondiudza «kusaina: hapana se ndawana odha2. Ndingazvigadzirisa sei?
Pindura kuna Alex Zaragoza
Rangarira, iwo mapakeji eRB, iwo akasiyana iwo maARM mapakeji, izvo iwe zvaunogona kuita kushandisa Chromium, zvakanyanya zvakafanana sezvo Chromium iri chirongwa icho Chrome chakavakirwa.
Ndatenda zvikuru, zvaive zvakakwana kwandiri Kuisa Google Chrome kubva pasuru package, ini ndaisakwanisa kuzviita kare.
Kana ndichiedza kuisa kubva kudura, ndinowana: "kusaina: Order haina kuwanikwa", kubva kuUbuntu / AMD64
Ini ndaida tsananguro uye zvese zvakandishandira kudzamara ndaona kuti yangu Linux makumi matatu nematatu = (ndinokukorokotedza nekuti unotsanangura chaizvo.
Andrew Jovel akadaro
Iko kukanganisa kunobuda mu "kusaina: Order haina kuwanikwa" rairo yekuraira haina kunaka, inofanira kungoenda seizvi: «sudo apt-key wedzera linux_signing_key.pub» mune mamwe mazwi emurairo iwoyo unofanirwa kudzima «kusaina kiyi chrome» uye zvimwe zvese kana zvakanyorwa.
Pindura Andres Jovel